सिभिल बैंकको संस्थापक सेयर लिलामीमा, क-कसले पाइन्छ भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सिभिल बैंकको संस्थापक सेयर लिलामीमा, क-कसले पाइन्छ भर्न ?
काठमाडौं - सिभिल बैंकको २९ लाख ९२ हजार २१०.२५ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामी खुल्ला गरेको छ । बैंकले यसअघि २ पटकसम्म बिक्री खुला गर्दा नबिकेको संस्थापक समूहको सेयर पून: लिलामीमा ल्याएको हो । यो संस्थापक समूहको सेयर अब सर्वसाधारणले पनि किन्न पाउनेछन् । जेठ ९ गतेसम्म मात्र यस लिलामीमा आवेदन दिन पाउनेछन् ।
हाल सिभिलको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ९३ करोड ३४ लाख ८५० रुपैयाँ मात्र छ । सम्पर्ण लिलामी सेयर बिक्रीपछि मात्र चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड ९३ लाख १० हजार ३६२ रुपैयाँ पुग्नेछ ।